शर्ट्स, युट्यूबको टिकटोक, अब विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध छ आईफोन समाचार
२०२० को सुरूमा सूचना माध्यमले भनेको छ गुगल टिकटोकको वैकल्पिकमा काम गरिरहेको थियो जसको नाम शॉर्ट्स हुनेछ। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा, यसले संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतमा बेटामा यस प्लेटफर्मको आधिकारिक घोषणा गर्‍यो।. १० महिना पछि, यूट्यूबले आधिकारिक रूपमा विश्वभरि शोर्टहरू सुरू गर्योअझै चरणमा छ।
टिकटोक विपरीत, शर्ट्स नेटव युट्यूब अनुप्रयोगमा समावेश छ, त्यसैले हामीले नयाँ अनुप्रयोग स्थापना गर्नुपर्दैन। यस तरिकाले, YouTube ले सुनिश्चित गर्दछ कि यूट्यूब प्रयोगकर्ताहरूले यस प्ल्याटफर्मलाई एक पटकमा एक नजर राख्दछन्, यदि केवल उत्सुकताको बाहिर मात्र हो, र त्यसो हो भने मोटा उपयोग आंकडा.
गुगलबाट शर्ट्स विकल्पहरू मध्ये एक हो जुन हामीले TikTok मा शुरू गरे पछि रील इन्स्टाग्राम द्वारा।
हामी युट्यूब शर्ट्सका साथ के गर्न सक्दछौं
पाठ थप गर्नुहोस् तपाइँको भिडियोमा विशेष क्षणहरूमा
अन्य शॉर्ट्सबाट अडियो प्रयोग गर्नुहोस् यसलाई तपाइँसँग मिसाउन
उपशीर्षकहरू थप्नुहोस् तपाइँको छोटोमा स्वचालित रूपमा
Seconds० सेकेन्ड सम्म रेकर्ड गर्नुहोस् सर्ट क्यामेराको साथ
तपाईंको फोन ग्यालरीबाट भिडियो क्लिपहरू थप्नुहोस् तपाईंले शॉर्ट्स क्यामेराको साथमा बनाएको रेकर्डि toमा
आधारभूत फिल्टरहरू जोड्नुहोस् तपाईंको शर्टको रंग सुधार गर्न (हामी भविष्यमा थप प्रभावहरू थप्नेछौं)
सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूसँग एक छ २ 250० भन्दा बढी लेबलबाट लाखौं गीतहरूको सूची जस्तै सोनी, युनिभर्सल, वार्नर, कोबाल्टी जो छिट्टै बढि सामेल हुनेछन्। वास्तवमा, ती प्रतिलिपि अधिकार समस्याहरूको सामना नगरी नै YouTube मा उपलब्ध भिडियोहरूको सबै अडियोहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्।
सन्दर्भमा सामग्री मोनेटाइजेशन, Google ले यो काम गरिरहेको छ भन्छ र यो कम्पनीको लागि अहिले प्राथमिकता हो। वास्तवमा, गुगलले के गरिरहेको छ भनेर हेर्नको लागि प्रतिक्षा गरिरहेको छ ट्याक टकको यो विकल्प सफल छ कि छैन।
यदि त्यसो हो भने, यसले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको लागि मुद्रीकरण प्रणाली सुरू गर्नेछ। यदि यो काम गर्दैन भने, हामीलाई थाहा छ कि यस प्लेटफर्मको भविष्य के हुनेछ: बन्द
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन अनुप्रयोगहरू » सर्टहरू, युट्यूबको टिकटोक, अब विश्वव्यापी रूपमा उपलब्ध छ